Ukuhlanza Okuthuthukisiwe kwe-Airbnb
Ukuhlanza Okwenziwe Ngcono kwe-Airbnb
Kunendinganiso entsha yokuhlanzeka ku-Airbnb. Thola izindawo zokuhlala ezizibophezele ekulandeleni inqubo yethu yokuhlanza esekelwa ochwepheshe.
Ukuzibophezela kombungazi ekuphepheni
Impilo nenhlalakahle yomphakathi wethu kuyinto ehamba phambili, kunanini ngaphambili. Ababungazi emhlabeni wonke* kuzodingeka bazibophezele enqubweni yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu ye-Airbnb.
Le nqubo enezinyathelo ezinhlanu isuselwa encwadini yokuhlanza ye-Airbnb, eyasungulwa ngokubambisana nowayenguDokotela Ohlinzayo wase-U.S. uDkt. Vivek Murthy futhi isekelwa ochwepheshe bezempilo nezokuvakasha emhlabeni wonke.
Akuhlanziwe nje kuphela, kuhlanzwe nange-sanitizer
Ukuhlanza okuthuthukisiwe kusho ukuhlanza okungaphezu kokuvamile ukuze usanithayize indawo yakho ngokuvumelana nemithetho ehamba phambili.
Jabulela ukuba wedwa ekhaya elikude nasekhaya lakho, ube kude nezixuku nabantu abaningi. Izenzo zethu zokuphepha ku-COVID-19 zibandakanya izimfuneko zokuqhelelana nabanye abantu ukuze uhlale uphephile kungakhathaliseki ukuthi usekhaya elizimele noma ekamelweni.
Thola ababungazi abazibophezele enqubweni yethu yokuhlanza yezinyathelo ezinhlanu - vele ubheke Ukuhlanza Okuthuthukisiwe phezulu ezindlini zabo. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe yokuthi ababungazi abanjani abazibophezela ekuhlanzeni, chofoza lapha.
Ukuphepha kuza kuqala. Ababungazi nabantu babo abahlanzayo balulekwa ukuthi bagqoke izembatho zokuzivikela ngenkathi behlanza.
Ababungazi kufanele basebenzise izibulali-magciwane ezigunyazwe ama-ejensi aqondisayo endaweni ekulweni namabhaktheriya namagciwane.
Izindawo ezithintwa njalo
Zonke izindawo okubekwa kuzo, ikakhulukazi lezo ezithintwa kaningi, kufanele zihlanzwe futhi zihlanzwe nge-sanitizer yesibulala-magciwane.
Abeluleki bethu bezempilo emhlabeni jikelele
I-Airbnb yasungula inqubo yokuhlanza yezinyathelo ezinhlanu ngokubonisana nowayenguDokotela Ohlinzayo wase-U.S. uDkt. Vivek Murthy, futhi isekelwe esiqondisweni esivela e-US Centers for Disease Control and Prevention kanye ne-World Health Organisation (WHO). Ababungazi kufanele bafunde futhi balandele zonke iziqondiso zendawo.
Le mithetho yokuhlanza ilungiswa kanjani uma kukhishwa iziqondiso ezintsha?
I-Airbnb izoqhubeka isebenzisana nabeluleki bethu abangochwepheshe futhi iqaphe ngokuseduze imiphumela emisha evela ezinhlanganweni zezempilo zomhlaba wonke, ilungise izinqubomgomo zethu ngokwesidingo.
Ngazi kanjani ukuthi umbungazi wami uzibophezele enqubweni yokuhlanza yezinyathelo ezinhlanu?
Ababungazi abazibophezela enqubweni yokuhlanza ethuthukisiwe bazophawulwa ezindlini zabo—vele nje ubheke uphawu olucwebezelayo. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngenqubo yokuhlanza yezinyathelo ezinhlanu, engashwampuluzi, bheka lesi sihloko.
Kuthiwani uma ngingumbungazi?
Njengombungazi, ukuzibophezela enqubweni yokuhlanza ethuthukisiwe enezinyathelo ezinhlanu kukusiza ukuba uzilungiselele ikusasa lokuvakasha, kunikeza izivakashi ukuthula kwengqondo, futhi kubonisa umphakathi ukuthi uyayihlonipha inhlanzeko. Kusukela ngo-November 20, bonke ababungazi kuzodingeka bazibophezele ezinyathelweni zethu ezintsha ze-COVID-19 zokuphepha nokuhlanza, ngaphandle kwalokho ama-akhawunti abo angahle abe nezixwayiso, avalwe futhi, kwezinye izimo, akhishwe enkundleni ye-Airbnb. Ababungazi kufanele babheke incwadi yokuhlanza ye-Airbnb, enemininingwane yezindlela ezinhle kakhulu zokusebenzisa inqubo yokuhlanza yezinyathelo ezinhlanu, futhi bafunde futhi balandele zonke iziqondiso zendawo. Chofoza lapha ukuze uzibophezele ekuhlanzeni.
Yiziphi ezinye iziqondiso zezempilo nezokuphepha ezenzelwe ukugcina izihambi ziphephile phakathi nobhubhane lwe-COVID-19?
Ngaphezu kokuhlanza, siye sasungula imithetho emisha ezosetshenziswa ababungazi nezivakashi, esekelwe esiqondisweni esivela ku-World Health Organization kanye ne-US Centers for Disease Control and Prevention.
Bonke ababungazi nezivakashi kumelwe:
Bagqoke isifonyo. Uma ababungazi nezivakashi kumelwe baxoxe noma uma kunendawo kawonk' uwonke ehlanganyelwayo engena nabantu bangaphandle kwendawo ebhukhiwe, gqoka okokumboza ubuso uzivikele ngaso sonke isikhathi njengoba kutusa ama-ejensi noma iziphathimandla eziqondisayo.
Uma nisendaweni eyodwa noma endaweni ehlanganyelwayo (njengombungazi noma isivakashi) hlala uqhele ngebanga elifanele kunoma ubani ongabhukhile naye ngazo zonke isikhathi.
Ngaphezu kwalokho, situsa ukuba ulandele izinyathelo zokuzivikela ukuze usize ekuvimbeleni ukubhebhetheka kwe-COVID-19:
Geza izandla zakho njalo.
Ungabungazi noma uvakashe uma uye wachayeka noma ubonisa izimpawu ze-COVID-19.
Qiniseka ukuthi ulandela noma imiphi imithetho neziqondiso zendawo yakini. Ukuze uthole eminye imininingwane, bheka lesi sihloko ku-Help Center yethu.